MacOS Sierra: Top Five Things You Need to Know About Apple's New Mac Software - News Ọchịchị
MacOS Sierra: Top ise Ihe Ị Mkpa Ịmata Ihe Apple si New Mac Software
Siri ala na Mac, ị nwere ike ugbu a idetuo ihe n'etiti dị iche iche Mac na iOS ngwaọrụ, gị na desktọọpụ bi ugbu a na ígwé ojii - na ihe niile nwere ike tabbed
Isiokwu a na-akpọ “MacOS Sierra: n'elu ihe ise mkpa ka ị mara banyere Apple ọhụrụ Mac software” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Tuesday 20 September 2016 13.32 UTC
OS X bụ ihe nwụrụ anwụ. Ogologo ndụ MacOS. Apple si ọhụrụ version nke ya Mac Sistem - Sierra - ga-abụ maka download mechara taa.
The free nweta nkwalite dị ka fọrọ nke nta ka ọ bụla Mac si mbubreyo 2009 na ga-abụ dị site na Mac App Store mechara taa. Mgbe ụfọdụ pụrụ iji jide ozugbo emelite, nyere ndị na-adịbeghị anya nsogbu na n'oge mmelite, ebe a bụ ise ihe ndị ọhụrụ ka a hụrụ site na ndị na-achọ iji gbanwee ka MacOS Sierra.
Siri dị ugbu a na gị na desktọọpụ ma ọ bụ laptọọpụ. Foto: Apụl
Nnukwu mgbanwe n'ihi na Sierra ọzọ karịa aha bụ Siri. Otu olu nnyemaaka si iPhone na iPad bụ ugbu a na Mac na yiri atụmatụ na-anaghị emezi emezi. Ọ nwere ike ịhụ faịlụ gị site na iji ọchịchọ asụsụ dị ka ẹkenam na El Capitan, set emek, elele spellings, ịkpọọ egwu na-agwa gị na ihu igwe, ma otú ihe ị na-eji ya na-adabere na ebe ị na-arụ ọrụ: ọrụ ibe gị open-plan ụlọ ọrụ na-adịghị aga n'anya n'eziokwu ahụ bụ na ị dị nnọọ malitere ikwu gị na kọmputa.
Universal clipboard pụtara na ị pụrụ iṅomi on otu igwe na mado na ọzọ enweghị nwere iji zipu ọ bụla faịlụ ma ọ bụ na nkwukọrịta n'etiti abụọ. Foto: Apụl
Ò nwetụla mgbe ị chọrọ Tapawa ihe n'etiti abụọ Macs ma ọ bụ a Mac na ihe iPhone ma ọ bụ iPad? Ugbu a, i nwere ike. Dị nnọọ idetuo ihe on otu igwe, see tapawa nke ọzọ na-eche. Mgbe ụfọdụ, ọ na-ewe a mgbe, dabere na otú ezi njikọ gị bụ, ma ọ na-arụ ọrụ ijuanya ọma. Ọ bụ maka ederede, oyiyi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ i nwere ike idetuo na clipboard.
3. iCloud mbanye desktọọpụ
iCloud Drive transports niile faịlụ na gị na desktọọpụ n'etiti igwe. Foto: Apụl
Mgbe ụfọdụ na-haziri na-echekwa ha nile faịlụ na nlezianya hazie nchekwa, ọtụtụ dị ka ihe niile kposara na desktọọpụ ma kpọchisie na otu igwe. iCloud Drive desktọọpụ nwere ike ugbu a mmekọrịta faịlụ na nchekwa dị na desktọpụ n'etiti igwe na iPhones ma ọ bụ iPads, mere ihe niile ọ bụghị haziri bụ inweta site multiple igwe.
4. Ihe niile bụ ihe na a tab now
View akwụkwọ na ndị ọzọ multiple-window ngwa ọdịnala na tabbed echiche, dị ka na-ekiri ndị iberibe video n'elu n'otu oge na picture-in-picture ngosi. Foto: Apụl
The tabbed interface kickstarted site na ihe nchọgharị ugbu a na-ọzọ ma ọ bụ na-erughị ihe niile dị Sierra. Si ederede editọ na-photos edezi, atụmatụ mmefu ego ngwa ọdịnala na email, -eti na "jikọrọ ọnụ All Windows" nhọrọ n'okpuru Ohere wedaa na ahụ ọkwa merges na window otu ngwa n'ime otu tabbed interface. Ọ bụghị ihe niile na-akwado ya ozugbo, na ụfọdụ na-eme nwere ọkara butere implementations, ma ọ bụrụ na ị chọrọ taabụ n'ebe nile on a Mac, ugbu a bụ gị ohere.
5. Apple Ṅaa, iOS 10 atụmatụ na ndị ọzọ
Ele gị echeta n'ime Photos. Foto: Apụl
Ọbọhọ nnukwu Mac atụmatụ, MacOS Sierra-agbakwụnye ndakọrịta na ọtụtụ ndị ọhụrụ atụmatụ si iOS 10. Ugbu a, i nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe na-eji gị Touch ID ihe mmetụta on your iPhone na weebụ, ị nwere ike izipu fancy chat ihe na iOS 10 ọrụ na Ozi, -ele videos edozi site na QuickTime Player na a ese n'elu mmiri window, na ọbụna Ị kpọghee ekwt gị Mac site na iji Apple Watch, ma ọ bụrụ na i nwere otu. Apple Music na iTunes now ese ihe dị ka nke iOS version kwa, na Ikike icheta Njirimara si iOS Photos ngwa bụ ugbu a na MacOS Sierra Photos ngwa. MacOS-ekwekwa nkwa onwe elu ụfọdụ ohere na gị na Mac site na ịchekwa ejibeghi faịlụ n'ime iCloud mbanye, ma ole ohere na ọ pụrụ onwe elu na-adabere n'ihe ụdị nke faịlụ na-na-elu draịvụ ike gị.
iOS 10: n'elu 10 ihe mkpa ka ị mara banyere Apple ọhụrụ iPhone na iPad software
Sony PS4 agaghi akwado MP3, Ma ọ bụ uku Audio CD
BBC A Machibidoro Ha Iwu Music: Top Singles iwu site BBC
Intel invents an optical cable that promises 1.6Tb...
18605	4 Peter	Sep 21, 2016
← Apple ekpughe Waterproof iPhone 7 Blackberry ịkwụsị ịdị na-ekwentị mkpanaaka na ! →
3.5k -eso ụzọ
102k -eso ụzọ
Apple HomePod N'ikpeazụ dị ịzụta
Olee otú smart ọkà okwu zuru show si smartphones